Ndakatora Gore Kubva Kumisangano, Hezvino Zvakaitika | Martech Zone
Ndakatora Gore Kubva Kumisangano, Hezvinoi Zvakaitika
Muvhuro, March 20, 2017 Mugovera, Kukadzi 10, 2018 Douglas Karr
Mwedzi gumi nembiri yekupedzisira ndiyo yakanyanya kubatikana mubhizinesi redu 'nhoroondo. Isu takadzorera patsva bhuku redu reMartech, takatamisa mahofisi edu mushure memakore manomwe, uye nekuvimbika takavakazve masevhisi kubva pasi kumusoro. Ndakafunga kusvetuka misangano mukati megore kuti nditarise kubhizinesi. Muchokwadi, ini handina kana kuita rwendo rwekuenda kuFlorida panguva yese, kwandinoda kuzorora nekushanyira Amai vangu. (Amai vaisanyanya kufara nezve izvi!)
Nguva iyi isati yasvika, ndakataura pamusangano mukuru wekushambadzira muNorth America uye ndakataurawo mhiri kwemakungwa. Muchokwadi, imwe yemisangano yangu yandaida iri kuitika izvozvi - Yemagariro Media Kushambadzira Nyika. Ini ndinonyatsoda kutaura kumisangano - zvinondipa simba uye ndinosangana nevazhinji venyu vandine hukama hwepadigital navo asi ndisina kumbobvira ndasangana nemunhu. Ndinoda kugovana maitikiro azvakaita ini nebhizinesi rangu.
Kupunzika Kushambadzira Misangano - Izvo Zvakanaka
Sezvineiwo, makore mashoma apfuura, bhizinesi redu rainyanya kuverengerwa nevatengi vanobva kunze kwemidwest. Isu taive nevatengi mumahombekombe egungwa uye mamwe chaizvo, akakura kwazvo mabhurani. Nepo iro rakanga riri basa rakakura uye mabhajeti emahombekombe anoshandisa zvakanaka mukati mepakati pekumadokero, isu takanetseka kuchengetedza hukama ihwohwo.
Nhasi, vese vatengi vedu vari pakati pekumavirira uye isu tine hukama hwakanaka navo. Kana vakapinda muchinetso, ini ndinongosvetukira mumotokari ndotyaira kuti ndivabatsire. Kwete chaizvo sarudzo nevari kunze kwenyika. Nekudaro, kana iwe uchida kuvaka inoshamisa kuvepo pamba, kuenda kumakambani emakambani hazvisi izvo chaizvo kukosha.
Sezvo ini pandinoona yangu musangano-hopping shamwari pamhepo, ini ndakave nemanzwiro akasiyana. Kuona iwo musoro wekufamba uye mhuri dzakasiiwa kumashure hakunakidze. Handipotse nhandare, kugara kunze kwemukwende wangu, uye nguva ndisipo kubasa nemhuri.
Ndakapotsa here kudzidza? Ini ndichave akatendeseka kuti ini handina chaizvo kudzidza chero chinhu pane chero musangano mukuru wandisina kumbobvira ndadzidza online. Muchokwadi, nekutarisa pane basa revatengi uye mhedzisiro yavo, ini ndinogona kunge ndakadzidza zvakawanda nekuchengeta musoro wangu mumutambo pano pamba.
Ini ndinoona varatidziri vemusangano vachivaraidza, asi kudzama uye zvakadzama zvinowanzo kushomeka zvakakwana kuti ini ndiise njere dzavo kuti dzishande pamba. Kana iwe uchitaura kumusangano, ndicho chinangwa chako… nekuti zvinoreva kuti imwe yemakambani ari muvateereri anogona kukuhaya kuti ubvunze navo.
Kuregedza Misangano - Izvo Zvakaipa
Sezvandambotaura pamusoro apa, vatengi vedu-base vakaburitsa kure nemabhuru makuru uye vatengi venyika. Ndichiri kuita chirongwa chimwe chete kushanda pamwe Dell, asi hachisi chiitiko chinowanzoitika kubazi redu sezvo ini ndiri kubatirana podcast nhepfenyuro irikuburitsa munguva pfupi iri kutevera. Muchokwadi, rwendo rwangu rukuru rukuru richava ku Dell EMC Nyika. Mukana iwoyo wakamuka kuburikidza newaaishanda naye aishanda uye akaenda kuna Dell, zvakadaro, saka ini handigone kuverenga chaizvo muchinyorwa chino.
Kusashanda nemhando hombe kunodzora chimiro chako zvishoma muindastiri. Chinhu chinotyisa kutaura, asi makambani eMidwest haashande nema agency asingashande nemhando hombe. Nekutenda, isu takabatsira mabhenji akakwana ekuti vanhu vanotitora zvakanyanya mudhorobha.
Ngatizvitarisei izvi, makambani anopinda misangano ane kushambadzira bhajeti. Zvakakomba, pakanga paine kushomeka kudiki kwekutungamira pamusangano… dai kambani yavo yaishandisa zviuru zvishoma zvemadhora patikiti remusangano, vakaziva kudyara mukushambadzira kwaive kukuru. Ini ndaigona kusangana nemabhizinesi gumi kumusangano uye vese vaive nebhajeti. Ini ndinogona kusangana nemabhizimusi gumi pamba uye rimwe rawo riine bhajeti. Misangano ndeyekudyara kukuru muchirongwa chako chekutengesa.
Ndichiri kutaura kuti ini handina chandakadzidza kumisangano, nguva iri kure nebasa nemhuri yekutarisa is kusuwa. Ndakawana manheru angu akagara pabhawa nevamwe vatengesi ndichinakidzwa. Isu taigara tichigovana kubudirira uye kukundikana izvo zvaisagona kutaurwa kubva mukutaura kana mharidzo, uye kunzwa izvo zvokwadi kwaisimbisa sezvo iwe waiziva kuti hausi wega mune dzako nhondo uye kubudirira.
Kuregedza Misangano - Iyo Yakashata
Unoona zita rangu, Douglas Karr, yakagovaniswa muzvinyorwa zvepamusoro? Unondiona pane podcast dzenyika? Iwe unondiona here munyika yenyika webinars? Kwete. Ndichiri kukura kurava kwedu pamhepo, ramba uchiwana toni yevateereri pane yedu kubvunzurudza kwekushambadzira, uye yakatanga yakabudirira zvinoshamisa Nharaunda yeMartech, Ndarasa toni yekutarisisa ini yandaimbove nayo.
Handina mubvunzo kuti kuenda kumisangano, kutsigira misangano iyi, nekuwana zvinwiwa kubhawa nevezera rangu zvakandichengetedza.
Muganhu wedhijitari unoshamisa, asi vanhu vanhu uye vachiri kuda kusangana kuti vaite chiratidzo chisingadzimiki. Kunyange ini ndiri mudhara kune imbwa yangu Gambino, ini handina kunyorwa mumazhinji eTop 100's online mugore rapfuura. Pandaive ndichienda kumisangano, ini ndaigara ndichinyorwa muTop 25 yevezera rangu.
Saka… Zvine Basa Here?
Kunyangwe zvichikosha kana kwete zvinoenderana nezvinangwa zvako. Kana zvese zviri zvekuzivikanwa, saka hongu. Kana zvese zviri zveego, saka zvachose hongu. Kana zviri zvekushanda nemhando hombe dzemhando, saka hongu. Kana zviri zvekusangana nevatungamiriri muindasitiri yako, saka hongu. Kana zviri zvekudzidza hunyanzvi hwako? Meh.
Kwandiri, pachangu, vatongi vachiri kunze. Ini ndinoda kutaridzika, asi ini handina chokwadi chekuti chakaita pfungwa zhinji mune zvemari. Bhizinesi rangu riine hutano nhasi kupfuura zvaraimboita. Uye, tiri kuratidza kushamisika kumba kuIndipolis, tichivaka studio mune imwe nzvimbo yekushandira pamwe matiri kuraira mabhizinesi echidiki, kupa mikana kuvadzidzi mutaundi, nekubatsira vazhinji vevasina-purofiti mutaundi.
Tags: kuenda kumisanganoanozivikanwaListsMarketingKushambadzira Misanganovatungamiriri vekutengesamemeskusazivikanwaparuzhinjipasocial media kushambadzira nyikavepamusoro vatengesi
Iyo Agile Kushambadzira Rwendo
Kubheka mu "Njere" kuDhivha-ku-Web Mishandirapamwe
Mar 22, 2017 pa 10: 16 AM
Kunyangwe ndichidzidza zvakanyanya pamhepo pane kumisangano, ndinonyatsoda kuenda kumisangano uye kutandara nevanhu vanotaura mutauro wekushambadzira kwedigital. Ini handimbofi ndakaenda kwavari, zvakadaro, nekuti ivo vanowana mari inodhura.
Zvichida kana ndikaita mablogi akakwana pachinhu kuti ndiwane zvinotevera, ipapo ndinenge NDOBHADHWA kuti ndiende uye nditaure, pane kuti nditsvaire kiredhiti kadhi kuti mukana uvemo.
Mar 22, 2017 pa 11: 21 AM
Ndakanakidzwa nekuverenga iyi Doug. Iwe une ruzivo rwakanaka rweizvo iwe zvaunoda ndezvipi, uye izvo izvo bhizinesi rako zvarinoda zviri.
Mar 23, 2017 pa 1: 31 AM
Thanks Marty! Chete zvakatora makore masere?
Mar 26, 2017 pa 7: 46 PM
Ndatenda, Doug. Mutyairi kwandiri kuenda kumisangano kwagara kuri kwakanaka mutauri. Pane dzakawanda nguva dzandinosarudza kugara pamba, ndakachengeta zviuru zvemadhora nekutenga zvavo mabhuku - iwo zvinyorwa zvakachengetedza kukosha kwavo kwepaneru. Ehe kunyangwe ichi chisiri chinotsiva chiitiko chaicho uye netiweki… inofanirwa kuve yakakodzera kune anyones kutariswa. Nekuda kweizvozvo, ndinonzwa kuti ndinowana hupfumi uye hwakadzama sosi yandinogona kushanyira ndadzokororazve.